Vaovao - Inona no tokony ho fantatrao momba ny gorodon'ny efitrano fandriana?
Ny efitrano fandriana dia mety ho lebensraum lehibe amin'ny fiainantsika. na mora ny firafitry ny efitrano fandriana na tsia, dia mety hisy fiatraikany amin'ny fenitry ny fitsaharan'ny olona, ​​avy eo mikasika ny fiainan'ny olona, ​​ny asany ary ny fianarany. noho izany na izany aza, ny efitrano fandriana ve tokony hohaingoina rehefa nohavaozina?
vokatra vita amin'ny vinyl
Ka ahoana no fisafidianana ny gorodon'ny efitrano fandriana? Asehon'ny fikarohana fa mandany ny antsasaky ny fotoanany ao amin'ny efitrano fandriana ny olona. Ny kalitaon'ny tontolon'ny efitrano fatoriana dia tsy mifandraika amin'ny kalitaon'ny torimaso fotsiny, fa misy fiantraikany mivantana amin'ny fahasalaman'ny olona ihany koa. Noho izany, ny gorodon'ny efitrano fatoriana dia tokony ho fitaovana ara-tontolo iainana sy tsy mandoto; toerana ho an'ny efi-trano kely na tsy dia misy jiro dia azonao atao ny misafidy gorodona miloko maivana izay hahatonga ny habaka ho lehibe sy hamirapiratra kokoa. Ary tokony hahatakatra ny tombony azo avy amin'ny gorodona vita amin'ny vinyl
1.Ny fitaovana voajanahary dia fiarovana ny tontolo iainana 100%
Ny akora eto amin'ny gorodontsika dia ny resina PVC avo lenta izay loharano voajanahary, tsy misy poizina ary azo havaozina, tsy misy akora manimba toy ny benzena, formaldehyde, matavy mavesatra, tsy misy zavatra mora miovaova, tsy misy taratra.
2.Mba fanoherana avo lenta
Ny gorodontsika dia misy fanoherana manokana tsy mitongilana, sosona fanoherana fanoherana ny gorodona ary ampitahaina amin'ny akora mahazatra, ny fikororohana ambony kokoa amin'ny gorodontsika rehefa lena.
3.Antimildew sy gorodona fanoherana bakteria
Ny haavon'ny gorodontsika amin'ny alàlan'ny fanodinana bakteria manokana, fanodikodinana anti-fouling, dia manana fahaizana matanjaka mamono bakteria, manakana ny fiterahana bakteria.
4. Mafana sy mahazo aina
Ny gorodonay dia malefaka, malefaka, mahomby amin'ny fitarihana hafanana, hafanana mitovy, mandeha an-tongotra tsy miakanjo amin'ny gorodinay dia mahatsiaro mafana sy mahazo aina.
5.Waterproof sy tsy lena
Ny singa lehibe amin'ny gorodontsika dia ny resina vinyl, ny resina vinina dia tsy misy filana amin'ny rano, ary tsy hitranga ny holatra noho ny hamandoana avo.
6.Ny mahia sy ny hazavana
Ny hatevin'ny gorodontsika 3.2mm -12mm, lanja 2-7.5kgs / sq.m., Latsaky ny 10% amin'ny akora iraisana, dia manana tombony tsy manam-paharoa amin'ny enta-mavesatra sy ny fitehirizana habakabaka amin'ny trano avo, koa manana tombony manokana amin'ny trano taloha fanorenana indray.
raha mila ianao WPC Vinyl Flooring Mpamatsy, azonao atao ny mandefa hafatra aminay.
Fotoana fandefasana: Apr-26-2020